- सुजन ओली/हरिप्रसाद शर्मा
१२ बैशाख २०७६, बिहीबार १३:०२
विदेशबाट धूलो दूध ल्याउँदा नेपालका किसान पलायन हुने र डेरी उद्योग बन्द सङ्कटमा पर्नेसम्मको व्याख्या गरेपछि मन्त्री खनालले उनीहरुको संरक्षण गर्ने नाममा धूलो दूधलाई कच्चापदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने बिस्कुट उद्योगमा भएको अर्बौं लगानी जोखिममा पारिदिएको एक बिस्कुट उद्योगीले बताए ।
काठमाडौं । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले गत असोजमा स्किम्ड मिल्क पाउडर (धूलो दूध) आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि स्वदेशी पाउडर उद्योगको ‘एकाधिकार’ बढेको छ भने बिस्कुट इन्डस्ट्रिज टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । डेरी क्षेत्रका केही उद्योगीको उक्साहटमा कृषिमन्त्री खनालले धूलो दूध आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा सञ्चालित १६ ओटा बिस्कुट उद्योगको भविष्य जोखिममा छ ।
मन्त्री खनालले बिनाअध्ययन खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिएर धूलो दूध आयात प्रतिबन्ध लगाएका थिए । केही उद्योगीले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र किसानको प्रवद्र्धनको हवला दिएर मन्त्री खनाललाई प्रभावित परेपछि उनले धूलो दूध आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन् ।
सुजल डेरी आफैंले पाउडर प्लान्ट चलाएको छ । त्यसैगरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थान दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले पनि पाउडर बनाउने गरेको छ । र नेपाल डेरी उद्योग सङ्घको पहलमा लामो समयदेखि बन्द रहेको चितवन मिल्क पनि सञ्चालनमा आएको छ । तीन ओटा प्लान्टबाट उत्पादित पाउडरले समग्र देशको माग धान्ने भन्दै मन्त्री खनाललाई ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि उनले आयात प्रतिबन्ध लगाएका हुन् ।
नेपालमा ३५ ओटा बिस्कुट उद्योग छन् । ती उद्योगमा ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । ३५ ओटा उद्योगमध्ये आधा उद्योगको मुख्य कच्चापदार्थ भनेकै धूलो दूध हो । खासगरी प्रिमियम बिस्कुट बनाउन धूलो दूध अनिवार्य हुन्छ ।
स्वदेशी पाउडर प्लान्टमा भित्रिने दूधबाट बनेको पाउडरले देशको माग धान्नै सक्दैन । डीडीसीले जति पाउडर बनाउँँछ, त्यति आफैंले खपत गर्छ । चितवन मिल्कलाई नेपाल डेरी उद्योग सङ्घमा आबद्ध उद्योगीले दूध दिन्छन्, त्यही दूध ‘कन्भर्सन’ गरेर फेरि सङ्घमा आबद्ध उद्योगीलाई नै उपलब्ध गराउँछ । त्यसैगरी सुजल डेरीले पनि आफूलाई चाहिने आफैंले खपत गर्छ । र केही मात्रामा बजारमा बिक्रीका लागि पठाउने गरेको छ ।
तर आजसम्म बिस्कुट उद्योगका लागि आवश्यक धूलो दूध कसैले पनि उत्पादन नगरेको बिस्कुट उत्पादक सङ्घका एक पदाधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
डेरी उद्योगीको लहैलहैमा मन्त्री खनालले कुनकुन क्षेत्रलाई कति धूलो दूध आवश्यक पर्छ भन्ने सामान्य अध्ययन समेत नगरी खाद्य प्रविधिलाई आयात बन्द गर्न लगाउँदा बिस्कुट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । डेरी उद्योगीले धूलो दूध डेरी उद्योगमा मात्रै प्रयोग हुने भनेर मन्त्रीलाई बुझाएको र उनीहरुकै भनाइलाई आधार मानेर मन्त्री खनालले धूलो दूध आयात रोकेको बिस्कुट उद्योगीको बुझाइ छ ।
नेपालमा ३५ ओटा बिस्कुट उद्योग छन् । ती उद्योगमा ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । ३५ ओटा उद्योगमध्ये आधा उद्योगको मुख्य कच्चापदार्थ भनेकै धूलो दूध हो । खासगरी प्रिमियम बिस्कुट बनाउन धूलो दूध अनिवार्य हुन्छ । धूलो दूधको फ्लेवर नहाली बिस्कुट नबन्ने अर्का एक उद्योगी बताए ।
डेरी उद्योगीको लहैलहैमा मन्त्री खनालले कुनकुन क्षेत्रलाई कति धूलो दूध आवश्यक पर्छ भन्ने सामान्य अध्ययन समेत नगरी खाद्य प्रविधिलाई आयात बन्द गर्न लगाउँदा बिस्कुट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
तर, सरकारले ७ महिनादेखि धूलो दूध आयात प्रतिबन्ध लगाएकाले प्रिमियम बिस्कुटको उत्पादनसमेत ओरालो लागेको उद्योगीहरु बताउँछन् । बिस्कुट उत्पादक सङ्घका अनुसार धूलो दूध अभावकै कारण अहिले ३५ उद्योगमध्ये १६ ओटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालित उद्योगहरु सबै आधाा मात्रै क्षमतामा चलेका छन् ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि धूलो दूध आयातको अनुज्ञापत्र नै दिइएन
विभागीय मन्त्री खनालको निर्देशनपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ७ महिनादेखि विदेशबाट धूलो आयात गर्न एउटा पनि अनुज्ञापत्र दिएको छैन । ७ महिनाअघि जति दूध ल्याएर स्टक राखेका थिए, त्यही दूध प्रयोग गरेर उद्योगले प्रिमियम बिस्कुट बनाइरहेका थिए । क्षमता घटाएर भए पनि केही उद्योगले थोरथोरै मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् ।
किन्ने ठाउँ छैन, विदेशबाट ल्याउन पनि पाइँदैन
सरकारले धूलो दूध आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बिस्कुट उद्योगीले स्वदेशमा किन्न पनि पाएका छैनन् । विदेशबाट आयात पनि रोकिएको छ । ‘हाम्रो मुख्य कच्चापदार्थ भनेकै धूलो दूध हो । सरकारले न नेपालभित्र किन्ने ठाउँ देखाउँछ, न आयात गर्न नै दिन्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘कच्चापदार्थ नै नभई कसरी बिस्कुट बनाउने ? विदेशबाट ल्याउन नदिए पनि किन्ने ठाउँ त देखाइदिनुपर्यो नि ।’
चितवन मिल्कले बिस्कुट उद्योगीलाई पाउडर दिँदैन । किनभने डेरी उद्योग सङ्घले आफूलाई बढी भएको दूध कन्भर्सनलाई दिएको हो । कन्भर्सनपछि उनीहरुले नै लैजान्छन् । सुजलले पनि आफूले प्रयोग गरेर बाँकी रहेको दूध मात्रै बजारमा पठाउने गर्छ । सुजलले जति दूध बजारमा पठाउँछ, त्यसले बिस्कुटको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन । डीडीसीले ट्रेडर्सलाई धूलो दूध दिन मिल्दैन भनिसकेको छ । हामीले ट्रेडर्समार्फत खरिद गर्ने गरेको एक उद्योगी बताउँछन् ।
कसरी उद्योग चलाउने मन्त्रीज्यू ?
कच्चापदार्थको ठूलो अभाव भएपछि बिस्कुट उद्योगीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष भेटेर उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको गुनासो गरेका थिए ।
स्वदेशी पाउडर प्लान्टमा भित्रिने दूधबाट बनेको पाउडरले देशको माग धान्नै सक्दैन । डीडीसीले जति पाउडर बनाउँँछ, त्यति आफैंले खपत गर्छ । चितवन मिल्कलाई नेपाल डेरी उद्योग सङ्घमा आबद्ध उद्योगीले दूध दिन्छन्, त्यही दूध ‘कन्भर्सन’ गरेर फेरि सङ्घमा आबद्ध उद्योगीलाई नै उपलब्ध गराउँछ । त्यसैगरी सुजल डेरीले पनि आफूलाई चाहिने आफैंले खपत गर्छ ।
कृषिमन्त्री खनालले ७ महिनादेखि धूलो दूध आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र नेपालमै किन्ने व्यवस्थासमेत नमिलाउँदा उद्योगको भविष्य अन्योलमा परेको गुनासो गरेका थिए । बिस्कुट उत्पादक सङ्घका नेतृत्वले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको थियो । नेपाली पाउडर प्लाउन्ड बिस्कुट उद्योगलाई धूलो दूध नदिने । विदेशबाट ल्याउन मन्त्री नदिने ।
आयात बन्दबारे मन्त्री खनालको प्रतिक्रिया
कृषिमन्त्री खनालले बजारमा गुणस्तरहीन र मिति सकिएका धूलो दूध नेपालमा छ्पापछ्याप्ती पाइएकाले आयातका लागि आयात अनुज्ञापत्र रोक्न विभागले निर्देशन दिएको हो । ‘मलाई कसैले पनि उक्साएको होइन र नबुझी बन्द गरेको पनि होइन,’ मन्त्री खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यो बेला नेपालमा भित्रिएको धूलो दूधको गुणस्तरमा ठूलो समस्या देखिएकाले विभागले रोक्न भनेको हो ।’
गौतमले यसरी लत्याए सरकारी निर्णय
आउँदो साता हुवावे वाई नाईन नेपाली बजारमा
बारीमै उखुबाट सख्खर बनाउँदै कृषक